गफ ! .....: प्रेम दिवशको शुभ कामना मेरी प्यारी कालीलाई । Happy Valentine Day to my sweetheart KALI
प्रेम दिवशको शुभ कामना मेरी प्यारी कालीलाई । Happy Valentine Day to my sweetheart KALI
तिमीले ईमेलमा पठाएको भ्यालेण्टाईन डे को ग्रिटिङ्ग कार्ड पाएर खुशी लाग्यो । मैले पनि ह्यापी भ्यालेण्टाईन भनेर यौटा ग्रिटिङ्ग कार्ड पठाएको छु मेरी कालीलाई । साँच्ची यो भ्यालेण्टाईन डे लाई नेपालीमा प्रेम दिवश नै त भन्ने होला नि हैन काली ? मैले यो ब्लग पोष्टको शिर्षकमै प्रेम दिवश लेखेको छु - ठिकै त होला नि । यो पोष्ट मैले केवल तिम्रो लागी लेखेको है काली । यसलाई प्रेमपत्र पनि नठान । प्रेमपत्र पनि हैन यो केवल मेरो मनमा फूलेका भावनाहरु हुन । यो पोष्ट लेख्ने विचार मनमा आएपछि मैले तिम्रो तस्विर पनि राख्ने विचार गरेको थिएं । फोनमा कुरा हुँदा मैले तिमीलाई सोधें पनि , तिमीले स्विकृती दिईनौ । प्रेम गरिन्छ भने खुल्लमखुल्ला गर्ने नि किन डराउने भनेर मैले बहस पनि झिकें । प्रेम गरिन्छ भनेर वेभ पेजहरुमा तस्विर सार्बजनिक गर्नु त बिज्ञापन गरेजस्तो हुन्न र ? आँखिर प्रेम बिज्ञापन पनि त हैन नि भन्दै तिमीपनि बहसमा सहभागी भयौ । मलाई मेरी कालीको तस्विर आफ्नो वेभ पेजमा राखेर देखाउन मन थियो तर तिम्रो कुरा सहि लाग्यो र मैले हारिदिएं । अँ साँच्ची , कतै कालीलाई आफु काली छु भनेर त तस्विर राख्न मन नलागेको हो कि ? हो भने पनि आफुलाइ काली छु , नराम्री छु भनेर नहेप ल काली ? तिमी काली छौ भन्ने थाहा छ नि मलाई । दीपक लिम्बुको यौटा गीत सुनेकि छौ ? ...मैले त्यही भएर मनपराको... भन्ने । मैले पनि मेरी कालीलाई काली भएरै मनपराएको नि ल ?
काली काली काली कति काली भन्न सकेको होला ? यो पढिरहंदा यस्तै सोच्छौ होला तिमी तर म तिमीलाई काली भन्न छाड्दिनं ल ? मलाई काली भन्न नै राम्रो लाग्छ । माया गरेर भनेको हुँ भन्ने त तिमीलाई थाहै छ नि हैन ? फोनमा कुरा हुंदा मेरो कालीले म काली छु , नराम्री छु , मलाई केहि आउंदैन , जात मिल्दैन भनेर चिन्ता गरिरहन्छौ । मेरो कालीले त्यस्तो फजुलको चिन्ता नगरे हुन्थ्यो । काली त भनेको मात्रै पो मैले मेरो काली राम्री छे नि । केहि गर्न नै नआउने पनि कहाँ हो र मेरो कालीलाई माया गर्न आउंछ नि । जात चाहिँ प्रकृतीले दिए अनुशार काली नारी हो र म पुरुष हुँ । त्यहाँ भन्दा अरु नसोच ल काली ? कुल गोत्र ईत्यादी त मान्छेले नै रचेको ढोंग हो । हामी हुर्के बढेको समाजले ठुलो र सानो , छुत र अछुत , पानी चल र अचल भनेर मान्छेलाई छुट्याएको छ । हाम्रै परिवारले पनि त्यही नीति नै अबलम्बन गर्दै आएको छ तर हामीले त हाम्रो समाजभित्रका संस्कार भनिने त्यस्ता कु संस्कारहरुलाई हटाउने पहल गर्नु पर्यो नि ? जातीय बिभेद अब युग असुहाउंदो कुरा हो भनेर परिवारमा पनि बिश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो नि । त्यसैपनि प्रेम भनेको जाती , बर्ग , धर्म भन्दा माथी हुन्छ । अझ पश्चिमा मुलुकमा त कतै कतै प्रेमलाई कानुनी रुपमै लिँग भन्दा पनि माथी राख्ने गरिएको छ । यहाँ त्यसको खण्डन गर्न तिर नजाउं तर त्यो अप्राकृतिक भने निश्चय नै हो । हाम्रो प्रेम सम्बन्ध प्रति तिमी संधै सकारात्मक बन ल काली ? कति पनि संदेह नराख है मनभित्र । विश्वासले नै प्रेम सफल हुन्छ । प्रेम मात्रै हुनलाई त एकै नजरमा , एकै चिनारीमा पनि हुन सक्छ तर सफल हुन त्यसमा निरन्तरता हुन आवस्यक हुन्छ र विश्वास नभै निरन्तरता हुन सक्दैन । मेरो बारेमा कालीलाई भलिभाँती थाहा छ । भन्न भ्याए सम्मका कुराहरु कुनै पनि लुकाएको छैन । भन्न बाँकी कुराहरु पनि लुकाउने धृष्टता गर्दिनं । कालीको बारेमा मलाई धेरै जानीरहनु आवश्यक नै लागेन । जती जानें त्यो प्रयाप्त छ । म जस्तो यौटा असफल बैवाहिक जीवन भोगिसकेको मान्छेलाई निस्वार्थ प्रेम गरेर जीवन भरी साथ दिन्छु भन्ने हिम्मत भएकि काली मैले अरु कहाँ पाउंछु र ? त्यसमाथी पनि मेरो यौटि छोरी छे भनेर जान्दा जान्दै मेरी छोरीको आमा बनिदिन तयार हुने काली पाउनु मेरो लागी सौभाग्यको कुरा हो । बिहे गर्छु नै भन्दा म संग बिहे गर्न राजी हुनेहरु पनि भेटिएलान तर त्यसरी राजी हुनेहरुमा अमेरिकाको ऐस आराम र डलरको लालच नहोला भन्न कहाँ सकिन्छ र ? अमेरिकामा सामान्य जीवन बाँच्नेहरुको जीवन शैली कस्तो हुन्छ र डलरको सपना यथार्थमा कस्तो हुन्छ भनेर बुझीसकेकि कालीले मलाई गरेको मायामा मैले छलछाम देखेको छैन । त्यही नै मेरो लागी खुशीको कुरा हो ।
काली भौगोलिक दुरीले हामी निक्कै टाढा छौं । अहिले मैले यो पोष्ट लेखिरहंदा फेब्रुवरी तेह्र तारिख रातीको बाह्र बज्नै लागेको छ । बाह्र बजे पछि यहाँ फेब्रुवरी १४ लाग्छ । यतीबेला तिमी भएको ठाउंमा फेब्रुवरी १४ को दिउंसोको झण्डै ५ बज्यो होला ( ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनं ) । हामीबिचको समयको अन्तर १७ घण्टाको छ । यतीबेला तिमी ड्युटीमा छौ र फोनमा कुरा गर्न सकिन्न अहिले । समयको तालमेल नै त्यस्तै छ । अब लगभग १० मिनेट पछि म यो पोष्टलाई publish गर्छु । तिमी ड्युटी सकाएर आउंदा मेरो बिहान भै सकेको हुन्छ । आशा छ तिमीले आएर यो ब्लग पढ्ने छौ र मलाई फोन गर्ने छौ । ( अहिले १२ बजिसक्यो र भ्यालेण्टाईन डे शुरु भै सक्यो ) तिमीले त हिजै मलाई Happy Valentine भनिसक्यौ , मैले त भन्नै बाँकी छ । तिमीले गरेनौ भने पनि म बिहान तिमीलाई फोन गर्छु ल काली ? Happy Valentine भन्नलाई । अहिले यो ब्लगमा पनि I wish youavery Happy Valentine Day ल काली ? Miss me है kali , I'm really missing you in this moment .
krishnan kc"chhal" said...
हजुरको लेखाइले तपाइको बारेमा धेरै थोरै जान्ने अबसर पाए यसको लागी धेरै धेरै धन्यबाद ल ।
गीत : किन मान्छे माया भन्छन ।
गजल : मोहबत ने हमको यारों ।
गीत : तिमी जून हौ ।
Poem : Contempletion
गीत : मेरो सुखलाई सारा खुशीलाई ।
poem : The single ray of your love .
Haiku with inspirational photos
कविता : आवाजका अक्षरहरु पढ्न फेरी आउनेछु म ।
कविता : तिम्रो कसम म यस्तै चाहन्छु ।
गीत : मेरी माया ।
प्रेम दिवशको शुभ कामना मेरी प्यारी कालीलाई । H...
गजल : धेरै पछि आज कोहि ।
कमेण्टमा कविता : नेपालको माया छ कि छैन ?
गीत : अकेला हुं मैं कोहि नहिं है ।
गजल : ईन्द्रेणी फुटेर ।
गजल : कसम किन खुवाउंछौ ?
गीत : झार्दछ आँशु आकाशले ।
poem : One day in to the photo album
गजल : रातैभरी त्यो जुन रोयो ।
गीत : भोक हो माया ।
कविता : जवानी ।
गजल : हातमा तिम्रो तरवार देखें ।
कविता : फूलको आवाज ।